Ahoana no hitiavanao ny tenanao: ny tsiambaratelo iray amin'ny fiovan'ny seismika amin'ny fitiavanao tena - An-Tsaina
Ahoana no hitiavanao ny tenanao: ny tsiambaratelo iray amin'ny fiovan'ny seismika amin'ny fitiavanao tena
Ny hoe manja dia midika ho tenanao.
Tsy mila eken'ny hafa ianao.
Mila manaiky ny tenanao ianao.– Thich Nhat Hanh
Ilay teny etsy ambony dia mety ho toa foto-kevitra somary tsotra, saingy lalina amin'ny fahamarinana ao aminy, ary tena sarotra ny manaraka azy. Io anefa dia iray amin'ireo fitsipika fototra hitiavan-tena.
Mety ho sahirana amin'ny fitiavan-tena ianao izao, fa amin'ity lahatsoratra ity, hianaranao teknika iray amin'ny famporisihana ity fahatsapana tsy fahita firy ity. Raiso ity fomba tokana ity dia hahita fahasamihafana tena izy ianao amin'ny fomba itondranao ny tenanao.
Mamelà ahy hanazava…
Isaky ny andro iray dia tototry ny hafatra avy amin'ny lalana rehetra izahay izay manandrana manodinkodina anay hankahala ny lafiny sasany amin'ny tenanay. Ireo dia mety ho tonga amin'ny endrika doka amin'ny magazine na fahitalavitra manentana antsika hihinana sakafo sy hanao fanatanjahan-tena mba hananana 'vatana amoron-dranomasina' izay ho tiavintsika.
Na mety maheno gurus yoga ianao manizingizina fa raha mbola misotro zava-manitra maitso ampy isika ary milaza fanamafisana isan'andro, dia hiaina anaty fahasambarana tsy tapaka isika ary farany hitia ny tenantsika sy ny olon-drehetra amin'ny fomba natoron'ny Universe antsika hatrizay.
Tsia, tsia. Tsy misy na iray aza amin'ireo hafatra ireo midika zavatra voaozona raha ny tena fitiavana tena no resahina, satria izy rehetra dia miomana amin'ny fanovana.
Rehefa mianatra ny fitiavana ny tenanao ianao, ny tsiambaratelo dia ny fitiavanao ny tenanao amin-kitsimpo dia midika hoe manaiky ny tenanao tsy misy fepetra. Tsy manapa-kevitra fa ho tianao ny lafiny X amin'ny tenanao na eo aza ny 'lesoka'. Satria tsy manana lesoka ianao. Olona mitombo sy mivoatra isa-minitra isan'andro ianao.
Ny ray aman-dreny manan-janaka kely dia mahita ireo karazana fanovana ireo amin'ny fotoana tsy miova, fa tsy sosotra amin'ireo olona kely ireo satria tsy tonga lafatra sy mivoatra izay afaka ho tonga, ny ray aman-dreny dia manam-paharetana sy malemy paika, mahafantatra fa ny zanany dia mitombo hatrany amin'ny fototra tsy tapaka izy ireo mianatra lesona, ary manandrana mamantatra ny hafahafa, mampisavorovoro tontolo manodidina azy ireo.
Alao an-tsaina ange izany faharetana izany ary fitiavana tsy misy fepetra nitodika tany amin'ny tena.
Tiavo ary ekeo ny tenanao toy ny itiavanao ny zanakao
Tena tsy misy fahasamihafana lehibe eo aminay sy ny ankizy raha ny momba ny fivoaran'ny tena manokana, afa-tsy ny hoe feno lasibatra andraikitra sy volo amin'ny vatana bebe kokoa isika. Mila mianatra fahaiza-manao sy hevitra vaovao isika, mifampiraharaha amin'ny faritany vaovao, ary miady amin'ny fanafihana olana ara-pientanam-po amin'ny lafiny rehetra.
Tototry ny vaovao ratsy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao isika, tsy maintsy miasa amin'ny alàlan'ny olana eo amin'ny fifandraisana, ny olana ara-pahasalamana ary ny tantara an-tsehatra any amin'ny toeram-piasana… mandritra ny fotoana rehetra manameloka ny tenanay noho ny hadisoana hita rehetra.
Raha tokony hijerena akoho ho toy ny fotoana ianarana ary hamela ny tenantsika ho olombelona marefo manandrana mivezivezy ny fiainana araka izay tratra, dia matetika no resin'ny tena rikoriko ary fahatsapana ho meloka satria tsy 'tonga lafatra'. Mety hanao fahadisoana isika any am-piasana, hiady amin'ireo mpiara-miasa amintsika noho ny tsy fifandraisan-davitra, mankahala ny tenantsika noho ny fahazoana kilao vitsivitsy na manana fahasahian-dratsy hamolavola ny tsipika fihomehezana na ny volo fihomboana.
Moa ve misy amintsika tsy mamela heloka tsy manam-pahataperana amin'ireo izay tiantsika tahaka antsika amin'ny tenantsika?
Eritrereto ny resaka ratsy ataonao izay mety hataonao isan'andro, mety hiteny izany amin'ny zanakao ve ianao? Karazan'olona iza no ho henjana sy lozabe amin'ny olona marefo izay tena manandrana mikorontana amin'ny fiainana araka izay azony atao?
Mety ho foto-kevitra sarotra ho an'izay tsy manan-janaka izany, fa na ny olona tsy mitaiza olombelona kely aza dia mety nanana traikefa tamin'ny fitiavana tsy misy fepetra sy tsy mitsara. Ankizy vaovao iray izay ny latabatra manerana ny gorodona dia tsy manao izany noho ny lolompo, fa satria mbola tsy nahalala ny lalàna momba ny fanalefahana ny tenany any ivelany izy. Hanana lozam-pifamoivoizana izy indraindray, na mety hipipy amin'ny tany raha matahotra na taitra izy, fa ny vintana dia rehefa mitranga izany, dia tsy hiantsoantso na hokapohina izy, fa hahazo fampiononana sy toky.
Toetra 15 an'ny olona matotra ara-pientanam-po
Ahoana no hireharehana amin'ny tenanao
Ahoana no hampitomboana ny tenanao amin'ireto teknika fampitomboana 4 ireto
Ahoana no hinoanao ny tenanao ary handresena ny fisalasalana momba ny tena
Raha manana andro ratsy ianao dia ampahatsiahivo ny tenanao amin'ireo zavatra 20 ireo
Fanekena tsy misy fepetra, tsy misy fampitahana amin'ny hafa
Tsy misy olona eto amin'izao tontolo izao mitovy aminao, ary manana harena tsy mampino izany. Iza ianao, ary inona no hatolotrao tena miavaka , ary tsy azo ampitahaina amin'ny olon-kafa. Mandrakizay. Izany dia eritreritra revolisionera iray tokoa eto amin'izao tontolo izao izay mampitaha antsika tsy tapaka amin'ny filamatra iheveran'ny hafa fa 'tokony' hiezahantsika hitovy, nefa miala tsiny, tsia. Tsy misy olona lehibe kokoa na ambany noho ny olon-kafa, ary tsy afaka mampitaha ny tenantsika amin'ny hafa isika. Tsy antsika izy ireo, tsy izy ireo koa isika.
maninona aho no tsy manam-pitiavana
Indraindray isika dia mety ho entanin'ny aingam-panahy avy amin'ny olon-kafa mba hanao karazana hetsika amin'ny fiainantsika manokana, fa tsy amin'ny fomba izay hanambaniana ny tenantsika na hahatonga antsika hieritreritra fa ho sambatra kokoa na hahomby kokoa isika raha toa azy ireo.
Ohatra, andao lazaina fa efa naniry ny hanangana fikambanana tsy mitady tombom-barotra hatrizay ianao, ary nisy olona iray tianao dia nanao zavatra nitovy tamin'izany. Amin'ny fomba rehetra, jereo ny fomba nanorenany ny fomba fiasa, saingy aza manandrana maka tahaka azy ireo. Azonao atao ny mankasitraka ny fahombiazan'izy ireo ary manandrana modely amin'ny azy ireo, raha mbola tsy manambany tena ianao amin'ny tsy fanarahana tsara ny dian'izy ireo.
Nisy namanao ve very lanja iray ary toa manana fahatokisan-tena be izao ry zareo? Eny ary. Ny fiezahana ho any amin'ny gym tsy tapaka ho matanjaka sy ho salama kokoa dia tsara, saingy tadidio fa izay zavatra hitanao amin'ny media sosialy dia misy olona voatazona be dia be mampiseho ny lafiny mahavariana azy ireo imasom-bahoaka, ary mahalana no mamoaka ny fihirifiry rehetra ao anatiny .
Isaky ny lafiny rehetra hitantsika fa adikao tsara, dia misy aloka miafina maro ao anaty zoro. Vitsy dia vitsy ny olona mampiseho ny sarin'ny hodiny milentika aorian'ny fihenan'ny lanjany, na ny sarin'izy ireo any amin'ny fanjakana reraka tanteraka rehefa avy niasa 18 andro nandritra ny iray volana mba hiala ny orinasany.
Rehefa miresaka ny fifandraisantsika amin'ny olon-kafa isika dia mety hanome voninahitra ny tenantsika amin'ny tsy maha-namana na mpiara-miasa tonga lafatra antsika, maniry ny hitovizantsika kokoa amin'ny olon-kafa fantatsika.
Mety hanamavo tanteraka ny tenantsika isika amin'ny fananana sakana ara-pientanam-po toy ny fanahiana na famoizam-po, izay indraindray mahatonga antsika hanafoana ny daty na ny namana diso fanantenana. Na dia ny havan-tiana aza dia mahatakatra amintsika fa tsy mahazo ny rehetra mahery setra ary ny fahatsiarovan-tena ho meloka, ny fameren-tena dia mety hanomboka amin'ny hardcore, izay mahatonga ny fahatokisan-tena mihintsana.
Betsaka amintsika no mety manana fanantenana amin'ny karazana olona tokony hahatongavantsika, satria izany ny ray aman-drenintsika, ny namantsika na ny iray tampo amintsika, ary tsara lavitra noho isika izy, sa tsy izany? Mendrika fitiavana kokoa? Fangorahana? Fahatakarana?
Rehefa manaiky ny tenantsika tsy misy fepetra isika, miaraka amin'ny fahalemem-panahy sy ny fankasitrahana, dia afaka manana fankasitrahana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika isika. Ny fankahalana ny tenantsika satria ny toetrantsika, ny toetrantsika, na ny sakafon-kena tsy maharitra dia tsy manaraka ny fenitry ny 'fahalavorariana' an'ny hafa toa fandaniam-potoana sy herin'ny manaitra, sa tsy izany?
Miverina indray amin'ny foto-kevitra momba ny fitiavantsika tena tsy misy fepetra isika, toy ny ataontsika amin'ireo zanatsika. Indraindray dia manampy raha mihevitra ny tenantsika toy ny tamin'ny mbola kely isika, na dia midika izany aza ny fangalana sary taloha hatramin'ny fahazazantsika ary nandefa vitsivitsy tamin'izy ireo manodidina ny trano. Isaky ny manomboka mieritreritra ratsy momba ny tenanao ianao dia jereo hoe iza ianao tamin'ny enin-taona na fito taona, ary miaro an'io zaza io dia aza avela hisy hiteny na hanao zavatra manambany na masiaka amin'io zaza io, satria ireo teny ireo dia mety hanimba bebe kokoa noho ny tsy fantatry ny ankamaroany akory.
Sarotra ny fiainana ary mampatahotra sy tsara tarehy, ary amin'ny farany, afaka ny ho tonga ny maha-izy antsika fotsiny isika, ary hanao ny tsara indrindra vitantsika.
inona no ataoko raha ratsy tarehy aho
ahoana no hahalalanao raha tsy liana liana ny sakaizanao
ny fomba fanaovana zavatra rehefa mankaleo ianao